travelgermany Archives | စာမျက်နှာ3၏3| တစ်ဦးကရထား Save
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ဘယ်နေရာမှာမဆိုခရီးသွားလာအမြဲအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်လှပသောမြို့ကြီးများရှာဖွေတွေ့ရှိရန်လုပ်, ငါတို့ဥစ်စာထဲကနေအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နိုင်ငံသို့မဟုတ်ယဉ်ကျေးမှု၏သမိုင်း. သို့သျောလညျး, သငျသညျအဆင်းလှသောအရပ်တို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဝေးနေအိမ်ထဲကနေသွားပါရန်မလိုပါ. အနည်းငယ်ဥရောပရထားခရီးစဉ်ရှိပါတယ်…